एप्पलले स्लो बनायो पुरानो मोडेलका आइफोन ? के कारणले गर्यो यस्तो !
शनिबार पौष ८ २०७४ लुअप
एप्पलका पुराना मोडेलका आइफोन प्रयोगकर्ताले पछिल्ला दिनहरुमा फोन सुस्त बनेको गुनासो गरिरहेका छन् । आइफोन प्रयोगकर्ताको गुनासो बढ्दै गएपछि एप्पलले यसको कारण खुलासा गरेको छ ।
एप्पल आफैंले पूराना मोडेलका आइफोनको परफर्मेन्स स्लो बनाइदिएको पुष्टि गरेको छ ।
धेरै मानिहरु एप्पलले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई नयाँ आइफोन किन्न बाध्य पार्नका लागि पुराना आइफोन स्लो बनाउने गरेको आशंका गर्दै आएका थिए ।
लिथियम ब्याट्रीहरु समयसँगै क्षमताहीन हुँदै जान्छन् । चार्जिङ र डिस्चार्जिङ चक्रका कारण यस्तो हुन्छ । दुबै चक्रमा लिथियम आयोन ब्याट्रीको पदार्थमार्फत प्रसार भएको हुन्छ । लगातारको प्रयोगबाट ब्याट्रीमा आउने परिवर्तन भनेको स्टिलको सतहमा विस्तारै बन्ने खिया जस्तै हुन्छ । यसले ब्याट्रीको पदार्थलाई विस्तारै क्षयीकरण गर्दै जान्छ र फलतः त्यसले कम चार्ज मात्र संग्रहित गर्न सक्दछ र डिभाइसलाई चाहिने पिक चार्ज प्रवाह गर्न असफल हुन्छ । बीबीसी
इनोभेटिभ घर नेपालद्धारा मन्त्र च्यान्टिङ अफ टेक्नोलोजी अभियानको कार्यक्रम हुदै
बालबालिकालाई लक्षितगरी फेसबुकद्धारा नया एप्लिकेशन को सुरुवात
चीनमा अवैधानिकरुपले सञ्चालन हुँदै आएका वेभसाइट बन्द
नेपाल पनि पल्सर मोटरसाइकल बनाउने तयारीमा
अनुहार पहिचान गर्ने एप्स मानव बेचबिखन रोक्ने लक्ष्य , कति प्रभावकारी होला?
काठमाडौ‌ं स्याटलाइट सहर बन्दै ,(डीपीआर) बनाउन परामर्शदाता नियुक्त गर्ने